November 27, 2021 – သုတရသ
Zawgyi အစာအိမ်လေထိုး၊ လေအောင့်တယ်ဆိုတာ တကယ်ကိုခံစားရခက်တဲ့ ဝေဒနာတစ်ခုပါ။ စားချင်တာတွေစားပြီး ဗိုက်ထဲမှာ တင်းပြီးအောင့်လာလို့ တကယ်ကို သက်သောင့်သက်သာ မရှိစေပါဘူး။ အစာအိမ်ပြဿနာရှိတဲ့သူ အများစု ဖြစ်တတ်ပြီး၊ လေထစာတွေ စားလိုက်ရင် ပိုဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေထတဲ့ ဝေဒနာကို…
Zawgyi ပုံစံ ၇ နှင့် ပုံစံ ၁၀၅ တို့၏ မြေအသုံးပြုပိုင်ခွင့် အကြောင်း ပုံစံ ၇ နှင့် ၁၀၅အကြောင်း ပုံစံ (၁၀၅ ) ဆိုသည်မှာ ကျေးရွာ မြေစာရင်းဦးစီဌာနအပိုင် နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ…
Zawgyi “ကင်းထိုးကင်းကိုက်ငဖြူကြီးလိုက်” ဟုရှေးဆေးဆရာကြီးတစ်ဦးပြောဖူးသည်။ကင်း(၃)ကင်းရှိသည်။ကင်းခြေများ၊ကင်းမလက်မည်း (ခေါ်)ကင်းမြီးကောက်၊ကင်းပျ လေးတို့ဖြစ်သည်။ တောသူတောင်သားတို့ မမျှော်လင့်ပါပဲ ကင်းထိုးကင်းကိုက်ခြင်းမကြာခဏခံရ တတ်ပြီး အတော်လည်းခံရဆိုးပါသည်။မုရိုးပင်အား ငဖြူကြီး၊နဖြူကြီး၊နို့ခဲပင်၊မရိုးပင်၊ကျွဲပေါက်ပင် အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါသည်။ ထိုအပင်မှာ လမ်းဘေးတွင် အလေ့ကျပေါများစွာပေါက်တတ်ပါသည်။အများပြည်သူနှင့်တောသူတောင်သားတို့ မုရိုးပင်၏ ဆေးအသုံးလေးသိပါက ကင်းထိုးကင်းကိုက်ခြင်း ခံရသူကို ပျောက်ကင်းသက်သာ…
Zawgyi သားအိမ်မှာ ရေအိပ်တည်တာ၊ ဆီးကျောက်တည်တာ ကြောက်စရာမလိုတော့ပါ. သားအိမ်ရေအိပ်နှင့်ကျောက်ကပ်အတွက် ခွဲစရာမလိုတော့ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ချိူ့မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သားအိမ် ရေတည်နေရင် ကျောက်ဖရုံသီး တစ်လုံးကို ရေစင်ကြယ်စွာဆေးကြော၍ ညဘက်အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါ ဗိုက်နေရာမှာထားပြီး ၃ ရက် မှ ၇…
သောကွာ ဆားလှူ လာဘျတှယေူ
Zawgyi သောကြာ ဆားလှူ လာဘ်တွေယူ ဂမ္ဘီရ အစီအရင် တစ်ခုပါ ထူးဆန်းတာတော့ အမှန်ပါ ဓါတ်ဆင်မူ့တစ်မျိုးလို့လည်းပြောနိူင်ပါတယ် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပြီးမှ ယုံပါလှူရမှာကတော့သောကြာ နံနက် ၉ နာရီနှင့် ၁၀ နာရီခွဲကြားသောကြာည ၉ နာရီနှင့် ၁၀…
Zawgyi ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးပါဆိုလို့ … တင်ပေးလိုက်ပါပြီ ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ပါနော် သံပုယိုသီ3းလုံး, ကြက်သွန်ဖြူအတက်ကြီး5တက်, ဂျင်းအနေတော်အတက် တစ်တက် ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတ်ထိုး, ကြက်သွန်ဖြူ5တက်အခွံခွါ, ဂျင်းကိုအခွံခွါ ပါးပါးလှီး!! ရေ2လီတာ ပွက်ပွက်ဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတွေထည့်ပီး…
ပွေးတာထကျ အဆီတှကေို ပိုလောငျကြှမျးစတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး (၈)မြိုး
Zawgyi ပြေးတာထက် အဆီတွေကို ပိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (၈)မျိုး ကိုယ်အလေးချိန်ချမယ်လို့ တွေးထားသူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်မှာပါ။ ဒါက ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်မတို့ အတိအကျပြောနိုင်ပါတယ်။ ၁၅၅ပေါင်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နာရီလျှင်…
အခြိနျ ၂ ပတျအတှငျး လဖွေတျထားသူပငျ လမျးပွနျလြှောကျစနေိုငျတဲ့ မွနျမာ့ဆေးနညျး
Zawgyi အချိန် ၂ ပတ်အတွင်း လေဖြတ်ထားသူပင် လမ်းပြန်လျှောက်စေနိုင်တဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်း အိမ်မှာ လေဖြန်းထားတဲ့ အဖေတောင် သက်သာပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ နည်းလေးမို့ အားလုံးကို ကုသိုလ်အဖြစ် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ လေဖြတ်လူနာတောင် ၂ ပတ်အတွင်း လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်းလေးဖြစ်ပယ်။အကြောညပ်၊…
ကြောကျကပျ ဝဒေနာသညျ မြားအတှကျ ဝမျးမွောကျဖှယျ ဆေးနညျး
Zawgyi ကျောက်ကပ် ဝေဒနာ ခံစားနေရသူများမှာ လူလည်းပင်ပန်း၊ငွေကြေးကုန်ကျမှု့ များပြားသော ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သိန်းထောင်ချီ၍ ချမ်းသာသောသူပင် ဒေဝါလီ ခံရသော ရောဂါပါ ။ ကျောက်ကပ် ဆေး နေရသူများမှာ လူလည်းနာ ငွေလဲကုန်လှပါသည်။ အချိန်အခိုက်အတန့်…